जन्मदिनको धेरै भन्दा धेरै शुभकामना तिमीलाई…. – Complete Nepali News Portal
जन्मदिनको धेरै भन्दा धेरै शुभकामना तिमीलाई….
ScotNepal October 22, 2020
बिहान सबैरै उठ्ने देखि बेलुकी जुठा भडा राख्न हुन्न,
हाम्रो सस्कृती हाम्रो धरोहर हो भन्दै सिकाउने तिम्रो स्वभावमा थोरै भएपनि मैले हजुर आमा देखेँ ।
आफ्नो कामले समाजलाई आफ्नै तरिकाले बदल्न सक्नुपर्छ भन्ने,
जत्ति नै माया भएपनि थोरै मात्र खुलेर प्रस्तुत गर्ने स्वभावमा मैले तिमीमा मेरो बुवा देखेँ ।
माया र ममताले भरिपूर्ण अनि सानो खुशीमा पनि हाँस्न सिकाउने,
आफ्नो कारणले अरुलाई बाधा नहोस् भनी सोच्ने बानीमा मेरो आमा देखेँ ।
मेरो हरेक कदमलाई साथ दिई गल्तीलाई सच्याउदै, मलाई अझै अगाडी बढ्न सिकाउने, तिमीले चाहे जे पनि गर्न सक्छौ भनेर प्रेरणा दिने स्वभावमा मैले मेरो दिदी देखेँ ।
कुनै बेला निक्कै कडा तर कहिले काहिँ साह्रै चन्चल, हाँसो मजाक्, ठट्यौली पारा देखाई मलाई सक्दो खुशी बनाउने बानीले मेरो दाईपनि देखेँ ।
सान्तोना, तिमीमा मैले आफ्नो परिवार देखेँ, परिवार भन्दा टाढा रहेरपनि परिवार पाउन
खोज्नु यो भन्दा म अरु केहि माग्न सक्दिन । तिमीलाई सदैव माया र साथ दिनेछु ।
ढिलै भएपनि जन्मदिनको धेरै भन्दा धेरै शुभकामना !
पाठा र स्याल : नीति कथा
गित:नेपाल आमाको पिडा
भकुण्डेको चिनारी – हरिकृष्ण सिलवाल
अंध्यारो गोठ : कबिता
कोराना ए कोराना ! सबै लागिस् सोर्न